FISH inotsigira zvigadzirwa, varongi vezviitiko, uye mitambo yemitambo, iine chiitiko chinoshanda chinogonesa kuunganidzwa kwevatengi data, inofambisa kubatanidzwa kwevateveri pamabasa ekushambadzira, uye inopa vateveri kugona kuunganidza zvemukati, kupinda mumasepisi, uye kugovana zviitiko kuburikidza nevezvenhau. Kunyangwe iri kutora kuunganidzwa kwedata kwezviitiko zvemarquee, kuyera hunhu hwevanoenda kuzviitiko zvekambani kana kuongorora kubatanidzwa kwevatengi mumusangano, FISH inogona kuyera maitiro ese evashanyi. Iyo FISH yekuzivisa dashibhodhi inopa nekukurumidza
Chishanu chino, ndakave nerukudzo rwekupinda musangano nemamwe mafemu anomiririrwa zvakanaka uye vatungamiriri vemaindasitiri emuno kuti vashande nemaColts pane zvavanoenderera mberi kuita "Make it Personal" nevateveri vavo. Iri isangano rakanaka uye vanondiremekedza zvakanyanya. Varikushandisa zviwanikwa zvese zvavanogona kuwana kuitira kusimudzira hukama nevateveri vavo, uye kuvaunza padyo nesangano